Baningi ababalwa enkohlakalweni yethenda yokupheka
LIHLEHLISELWE u-Okthoba icala labasebenzi abahlanu beseHhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal abasolwa ngokukhwabanisa imali yethenda lokupheka
LIHLEHLELE u -Okthoba 2, icala elibhekene nabasebenzi abahlanu basehhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal elithinta inkohlakalo yethenda yokupheka uma kunemicimbi.
Laba bavele enkantolo yamacala athinta imali eThekwini izolo ngamacala okukhwabanisa kusuka ngo-2012.
Kusolwa ukuthi bahlangana nabaphekayo kwangalandelwa imigomo yokuthenga impahla, kwathi laba bathola nentshontsho kule thenda engaphezulu kukaR20 million.
Okhulumela oKlebe esifundazweni uCapt Simphiwe Mhlongo, uthe kuboshwe abasebenzi abane, nosomabhizinisi oyedwa.
“Kwababoshiwe kubalwa uMnuz Ziphathe Mboneni Cibane (55), isikhulu esiphezulu sezimali nomsizi wakhe uNksz Nomusa Zakwe (35), uMnuz Njabulo Makhathini (34) naye ongumabhalane, uMnuz Sithembiso Msomi (53) naye ongumabhalane onamava, noGugu Kheswa (51) uMqondisi wePhumalanga Communications Close Corporation.
"UCibane uphume ngebheyili kaR10 000, abanye baphuma ngebheyili kaR5 000 kwathi uGugu yena waphuma ngekaR20 000.”
UCapt Mhlongo uthe udaba luhlehliselwe * -Okthoba ukuze kuboshwe abanye abasolwa.
ULieutenant General Godfrey Lebeya, inhloko yoKlebe, ikwamukele ukuboshwa kwalaba.
“Njengoba sihlale sisho ukuthi labo abantshontsha imali kahulumeni neyomasipala sizobabamba sibabophe, senze njalo.”
Izolo ihhovisi likaNdunankulu lithumele isitatimende kwabezindaba lithi abanye balaba basebenzi bavele bamisiwe emsebenzini kumanje.
“Ihhovisi likaNdunankulu lithole imibiko ngokuboshwa kwalaba basolwa kwabezindaba. Ihhovisi likaNdunankulu liyawuhlonipha umthetho. "sifisa ukuveza ukuthi bese bevele bemisiwe abanye babasebenzi njengoba bekusaqhubeka uphenyo lwangaphakathi lokuqondiswa ubugwegwe. Njengoba lolu daba selusemaphoyiseni sizodedela umbuso ukuba wenze umsebenzi wawo. Siyalwisana nokukwabanisa, ngakho sizobhekana ngqo nabathinteka ekukhwabaniseni. Lokhu sizokwenza ngokusebenzisana nabezomthetho,” kusho isitatimende.
Kulesi sitatimende kwengezwe ngokuthi akumele abasezikhundleni baxhaphaze amandla, benze umphakathi ungakuthembi ukusebenza kukahulumeni. Sithe abenza lokho kuzomele babhekane nabo ngokushesha ukulungisa isimo.